Kooxda Real Madrid oo Fede Valverde ka hor istaagtay inuu u dhaqaaqo Horyaalka Premier League… (Maxay sameysay Madrid?) - Barwaaqo TV - Warbaahinta Bulshada Horumarkeeda
By admin September 5, 2021 39
(Madrid) 05 Sebt 2021. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa la soo warinayaa inay Fede Valverde ka hor istaagtay inuu u dhaqaaqo horyaalka Premier League oo uu xiiso ka helayay.
Real Madrid ayaa u aragta Fede Valverde inuu yahay qayb muhiim ah oo ka mid ah qorshaheeda mustaqbalka fog, waxaana ay ka horjoogsadeen inuu aado horyaalka English Premier League.
Madaxda Kooxda reer Spain ee Madrid ayaana kordhiyay qandaraaska uu Valverde kula joogay, si ay uga fogaadaan inuu aado Kooxaha ka dheela horyaalka Premier League xagaaga soo socda, kaddib markii uu xiiso ka helay bilo ka hor.
Federico Valverde ayaa 24-ka bishii hore ee Agoosto waxa uu Real Madrid u saxiixay heshiis cusub waqti dheer ah, kaasoo lagu burburin karo 1 bilyan oo euro.
23-sano jirkaan khadka dhexe ka ciyaara oo Real Madrid kaga soo biiray Penarol sanadkii 2016-kii ayaa heshiiska cusub ee uu saxiixay waxa uu kooxda ka dheesha horyaalka La Liga ku sii hayn doonaa illaa sanadka 2027-ka, taasoo meesha ka saareysa inuu u dhaqaaqo suuqa xagaaga ee Premier League.
Tan iyo markii uu xiddiga reer Uruguay ku soo biiray Real Madrid waxa uu kula guuleystay saddex koob oo waa weyn oo kala ah horyaalka La Liga, Spanish Super Cup iyo Koobka Kooxaha Adduunka ee Club World Cup.
— Real Madrid C.F. (@realmadriden) August 24, 2021
Imise sano ayay Kooxda Real Madrid ugaarsanaysay Eduardo Camavinga ka hor inta aysan la saxiixan Todobaadkii hore?